रिसिलिङ पिचमा कांग्रेसको जय - जागरण अनलाइन
असार १७ गते नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ३ ले घोराहीमा विरोध जुलुस निकाल्यो। उसको व्यानरमा ‘घोराही उपमहानगरपालिकाबाट गरिएका गुणस्तरहीन कालोपत्रेबिरुद्ध विरोध ¥याली’ लेखिएको थियो। सबैले भित्र भित्रै गुनासो गरेका थिए, कांग्रेसले सार्वजनिकरुपमा अगुवाइ ग¥यो। जनताको भावना नेतृत्व गरेको कारण कांग्रेसको जय।
हुन त त्यसभन्दा अघिल्लो दिन सा“झ घोराही उपमहानगरपालिकाको तर्फ बाट प्रवक्ता भरतमणि अर्यालले निकै कडा विज्ञप्ति निकाल्नुभएको थियो। पिचको विषयमा १६ गते सा“झ निकालिएको विज्ञप्तिमा कार्यालयभित्र प्राविधिक शाखामा काम गर्ने कुनै प्राविधिकको कतै संलग्नता देखिए, पाइए कानुनी कारवाही गर्न कुनै कसर बा“की राख्नेछैन भनी लेखिएको छ। त्यसैगरी स्टमेटविपरीत गुणस्तरहीन कार्य पाइए भुक्तानी नहुने व्यहोरा उल्लेख छ भनिएको छ। स्थानीय सरकारको हैसियतले निकालिएकोविज्ञप्तिजिम्मेवारीपूर्ण, जवाफदेहीतासहितको छ। यो कार्य प्रशंसनीय एवं स्वागतयोग्य छ। तर सरकारलाई सक्रिय बनाउने काम कांग्रेसले गरेको हो। सार्वजनिक रुपमा सत्ताधारी पार्टीका प्रतिक्रिया देखिएनन्। कांग्रेसले विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्नुपूर्व उपमहानगरपालिकाले कुनै सक्रियता देखाएन। त्यसकारण पनि घोराहीवासीको तर्फबाट कांग्रेसकै जय।
एक करोड २१ लाख कालोपत्रेमा बजेट परेको देखिन्छ। त्यसमा ७० प्रतिशत सडक बोर्ड र ३० प्रतिशत घोराही उपमहानगरपालिकाले व्यहोर्ने भनिएको छ। त्यो रकममा वेष्टर्न डेभलपमेन्ट कम्पनीले ७२ लाखमा ठेक्का सकार गरेको छ। घटाघटको माध्यमबाट ठेक्का आह्वान गरिएको उपमहानगरले भनेको छ। पहिलो कमजोरी ४९ लाख छोडेर ७२ लाखमा ठेक्का सकार गर्ने कम्पनीको हो। यत्रो रकम छोडेर फाइदा खोज्ने ठेकेदार कम्पनीले कुनै हालतमा पनि गुणस्तरीय काम गर्न सक्दैन। ठेकेदारहरुलाई जथाभावी रकम नछोड्न आग्रह गर्दछु। तपाईंले आफूलाई घाटा हुने र समाजलाई नोक्सान पर्ने काम गर्न छुट छैन।
उपभोक्ताज्यूहरुबाट सन्तोषजनक काम नभएको भन्ने व्यापक गुनासो आएकोले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको घोराही उपमहानगरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आन्दोलन चर्किदासम्म पनि घोराही उपमहानगरपालिकाका प्राविधिकरुलाई लाज लागेन। उनीहरुले प्राविधिकरुपमा ठीक छैन, गर्नुहुन्छ वा हुन्न भनेनन्। त्यस्तो गैरजिम्मेवार, अनुचित काममा पनि मुख नखोल्ने प्राविधिक शक्ति नगरवासीलार्ई चाहिएको छैन। मापदण्डविपरीत भनेर सहिद गेट नजिकको घरमा डोजर लगायो। कृषि सामग्रीलगायत धेरै घर निर्माण भए । त्यसमा आ“खा चिम्म ग¥यो। अहिले बजारभित्रै ठूला–ठूला घर बनिरहेका छन् कुनै मतलब छैन। त्यसरी पक्षपातपूर्ण एवं अन्याय गर्ने प्राविधिकले नगर उभो लगाउ“दैनन्। यदि नागरिकस्तरबाट बिरोध नआए उपमहानरबाट पनि कारवाही गरिदैनथ्यो। उपमहानगरका दुबैथरी कर्मचारीका सवारीलाई अफ्ठेरो परेको थिएन ? सभामुख कृष्णबहादुर महराको सवारी बजारको ज्ञिरसिलिङ छलेर गराइयो। अरु नागरिकलाई परेको असरमा चुप लाग्नुपर्छ ? त्यसकारण नागरिकको नेतृत्व सम्हाल्ने कांग्रेसको जय।
सामाजिक सञ्जालमा व्यापक जनगुनासो आएपछि सबैको ध्यानाकर्षण भएको थियो। कैयँंै दुर्घटनाहरु निम्तिएका थिए। सबै सवारी साधनहरु सतर्कताका साथ कुदाइन्थे। त्यस क्रममा धेरै मोटरसाइकल पल्टिए। खस्याम खस्याम गर्ने गिट्टीमा पैदल यात्रुलाई हिड्न मुस्किल भयो। ब्रेक लगाउ“दा सोचेको ठाउ“मा सवारी साधन नरोकिएपछि आपसमा ठोक्किए। हातखुट्टा घस्रिएका धेरैजना छन्। केहीले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै घोराही उपमहानगरपालिकामा उजुरी दिए। यति हु“दा पनि घोराही उपमहानगरका प्राविधिकले काममा आंैलो ठड्याउन सकेनन्। राजनीतिक नेतृत्वले पनि गलत काम भयो भनेर मुख खोलेन। घोराही–१५ का सदस्य दिलीपकुमार डा“गी ज्यानमारा पिच भनेर कैयांै पटक सडकमा आएर चिच्याए। धेरै यात्रुले प्रतिक्रिया दिए। अरुले सुन्ने गरी विरोध गर्नेहरु नेपाली कांग्रेस निकट बढी देखिए। यो प्रतिपक्षको धर्म मात्रै थिएन। आवश्यकता थियो। त्यसैले कांग्रेसको जय।
संयोगले आन्दोलन चर्किने बेलामा घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। विरोधको वातावरण बनिरह“दा नेपालमै हुनुहुन्थ्यो। आन्दोलन हुनुपूर्व १३ गते उहा“स“ग सिरिडी साइमन्दिरकोे कार्यक्रममा भेट भएको थियो। मैले मेयर साव, सडकको विषय के हो ? व्यापक विरोध आएको छ। कसो गर्ने हो ? भनेर सल्लाह लिन खोजेको थिए“। उहा“ अति व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। कार्यपालिका बैठक शुरु हुने बेला आएको उहा“का सल्लाहकार अरुण शर्माले जानकारी दिनुभयो। तर पनि मेरो कुराको सुनुवाइ आदरणीय मेयर सावबाट भयो। अति सरल व्यक्तित्व सबैका कुरा सुन्ने र मिठो गरी जवाफ दिने मेयर सावको प्रशंसनीय विशेषता हो। उहा“ले यो नया“ काम हो। नया“ काममा पहिला गलत प्रतिक्रिया आउ“छन्। पछि राम्रो बनेपछि ठिकै पो रहेछ। हामीले पो बिरोध नगर्नुपर्ने थियो भन्ने वातावरण बन्छ भन्नुभयो। म उहा“को जवाफले बक्क परें। लाग्यो सडक तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विरोधका स्वर उहा“का कानमा परेका थिएनन्। उहा“लाई अरु कुरा नछिर्नेगरी पिचको सकारात्मक पक्ष भरी पारिएको थियो।
उपप्रमुख सीता न्यौपानेलाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी सुम्पिदै उहा“ चाइनातिर प्रस्थान गर्नुभयो। यता कांग्रेस आक्रामक भयो। कांग्रेस जिल्ला सचिव शंकरप्रसाद डा“गी, साविक क्षेत्र नम्बर ३ का सभापति भूपबहादुर डा“गी लगायत नेताहरुले विरोध कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुभयो। स्थानीय सरकार घोराही–१५ का अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेयले निकै चर्को भाषण गर्नुभयो। आफ्नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यले विरोध गर्नुपर्ने काम घोराहीमा भएको छ। कुनै पनि समितिको संयोजक हुनु भनेको स्थानीय सरकारको मन्त्रीसरह हो। केन्द्र तथा प्रदेशमा मन्त्री हुन्छ । स्थानीय तहमा संयोजक बनेर काम सम्हाल्छ। अध्यक्ष पाण्डेय समितिको संयोजक हो। पिचको सबै भन्दा धेरै काम घोराही–१५ मा गरिएको छ। काम गर्नु अघि स्वीकृति र अन्तिम भुक्तानीको सिफारिस वडाले दिनुपर्ने हो कि होइन ? सम्बन्धित वडाले थाहै नपाई काम अघि बढाइने हो भने स्थानीय सरकारको अर्थ के ? स्थानीय निकाय बनाएर संघीय संरचना खारेज गरे भयो नि ? आफ्नो वडा क्षेत्रमा त्यत्रो काम भइ सक्दा पनि अध्यक्ष पाण्डेयले किन रोक्न सक्नुभएन ? उहा“को अधिकार किन र कुन निकायबाट खोसियो ? यसको जवाफ पनि कार्यपालिकाले खोज्नुपर्छ। त्यसस“गै बैंक रोड क्षेत्र घोराही–१४ मा पर्छ । त्यहॉ“ वडाध्यक्ष शक्तिराम डा“गी पनि मैले थाहै नपाएको बेला पिच गरियो भन्नुहुन्छ। यस्तो पनि स्थानीय सरकार हुन्छ ?
देश संघीयतामा गइसक्दा आफ्ना संरचना पुरानै राख्ने हुतिहारा कांग्रेस हो। जसले संघीय संविधान बनाउने नेतृत्वको अवसर पायो त्यसैले कार्यान्वयन गर्न वर्षौंसम्म पनि सकेको छैन। अहिलेसम्म पनि साविक भन्ने लाजमर्दो शब्द बोकिरहेको छ। हरेक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने हैसियत कांग्रेसले राख्नुपर्दथ्यो। राणा विरुद्धको सात सालको क्रान्तिको नेतृत्व गरेकै हो। त्यसबेला कांग्रेसले बगाएको रगत पसिनाको हिसाव गर्ने हो भने कम्तिमा एक शताब्दी कांग्रेसले देशको शासन चलाउनुपर्दथ्यो। त्यसस“गै २०४६ सालको परिवर्तनमा पनि कांग्रेसले अगुवाइ गरेको हो। त्यसबेला पनि धेरै मतका साथ विजयी भयो। पछि अन्तरकलहमै रुमल्लियो र त्यो हैसियत गुमायो। माओवादी जनयुद्धको जगमा नेपालमा गणतन्त्र आयो। अकल्पनीय परिवर्तनपछिको २०७२ को संविधान जारी गर्ने नेतृत्वदायी अवसर पनि कांग्रेसले पायो। तर पार्टी बनाउन सकेन। त्यसपछिको चुनावमा पराजित भयो। माओवादी एमाले एकतापछि निरीह प्रतिपक्षको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिले पाएको छ। त्यही हुतिहारा कांग्रेसलाई यस पटक घोराही बजारले जय भन्नैपर्ने भयो।
चुनावका क्रममा आफ्नो पकड क्षेत्रबाट निकै खुम्चिएको कांग्रेस घोराहीमा उदाहरणीय बन्न सकेन। आफूले जितेका वडाहरुको बजेट समेत समयमा ल्याउन सकेन। ठीक–ठीक समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेन। वडाका बजेटहरु विधिसंगतढंगले खर्च गर्न र त्यसको प्रचार गर्नमा कांग्रेस चुकेको छ। नेकपाका अध्यक्षहरुले जितेको भन्दा फरक र उदाहरणीयढंगले वडा सरकार चलाउनुपर्दथ्यो। आगामी चुनावमा कांग्रेसले आफ्नो किल्ला फिर्ता गर्ने उदाहरण बन्नुपर्दथ्यो। आफ्नै वडामा गतिला काम नगरेर झनै कमजोर बन्दै गएको छ। केही वडामा कांग्रेसको सरकार आफ्ना वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी दिन नसक्ने निकम्मा बन्यो। कार्यविभाजन गरेर सबैलाई सक्रिय बनाउनुपर्दथ्यो। सकेन। कुनै योजना र कार्यक्रम ल्याएर आफ्नो पहिचान छोड्न सक्नुपर्दथ्यो, त्यसको छॉ“‘टका“टण् अहिलेसम्म देखाएन। छिमेकी वडाको चर्चा परिचर्चा चलिरह“दा पनि आफ्ले कुनै वास्ता गरेन। अझै आधा समय बा“की छ। मेरा पालामा भए गरेका काम भनेर चुनावी नारा बनाउने प्रयत्न कांग्रेसका वडाध्यक्षहरुले गर्नैपर्छ। यति धेरै काम बा“की हु“दा पनि पिचका मुद्दा सहीढंगले उठायो त्यसैले घोराहीले भन्नुपर्छ, कांग्रेस जय।
यो रिसिलिङ पिच राजमार्गमा गरिने हो भनेर ठेकेदार कम्पनीले भनेको छ। फोनमार्फत उसले दिएको जानकारी अनुसार हेवी सवारी साधन चल्ने क्षेत्रमा गरिने पिच हो। त्यहा“ गह्रांै टायरले गिट्टी थिच्छन् र पिच सफल हुन्छ। त्यही कुरा घोराही उपमहानगरपालिकामा राख्दा यहा“ पनि हुन्छ भनियो रे। परीक्षणका लागि गरौं भनियो रे। बजारभित्र हल्का सवारी साधन चल्ने भएकाले हु“दैन भन्दा पनि नमानेर पिच गरियो। त्यसैले हामीले भुक्तानी पाउनुपर्छ भनेर ठेकेदारले माग गरेको छ। यता नागरिकले यसको भुक्तानी दिनुहुन्न भनिरहनुभएको छ।
यता बजार सफा हु“दै थियो अहिले धुलो थपिएको छ। अब धोएर पनि नजाले पखालेर पनि नहुने भएको छ। गिट्टी उठाउ“दा पनि सुध्रिएको छैन। जोखिम झन्–झन् बढी देखिन्छ। यस्तो खराब चिजमा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्राविधिक वा जनप्रतिनिधि कुन कर्मचारीले परीक्षणको रुपमा काम गर्न लगाए ? उनीहरुले जवाफ दिनैपर्छ। त्यसस“गै सा“च्चै ठेकेदार कम्पनीले हु“दैन भनेको हो भने यहा“का कुनस्तरका प्राविधिकले गर्न लगाए ? यसको जवाफ नागरिकलाई दिनुपर्छ। नजानेको काममा प्राविधिकले मुढेबल गरेको सुहाउ“दैन। अनुमानका आधारमा वा अन्य स्वार्थमा काम गर्नेहरु प्राविधिक जनशक्ति हुनै सक्दैनन्। यो मुद्दाको सही छिनोफानो नगरिए उपमहानगरको कदमको विरुद्ध जागरुक हुनैपर्छ। त्यसको नेतृत्व गर्ने हैसियत कांग्रेसले राख्नुपर्छ। यो मुद्दा टुंगोमा पुगोस् जय कांग्रेस।